Xaliimo Yarey: Annigu Isma Casilayee Madashu Waajibaadkooga Ka Soo Baxaan – Heemaal News Network
Xaliimo Yarey: Annigu Isma Casilayee Madashu Waajibaadkooga Ka Soo Baxaan
Gudoomiyaha Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey) ayaa ka jawaabtay eedeynta xoogan, ee kaga timid Madasha Xisbiyada Qaran.
Xaliimo Yarey oo la hadashay VOA ayaa tiri “Anagoo sheegeyno doorashada sidee u dhaceyso, kuna cabireyno doorashooyinka adduunka sidey u dhaceen oo la jaan-qaadeyno xaaladda dalkeena ka jirta ayaa hadana waxaan sheegeynay markasta, oo ay ku lifaaqneyd waa in la hellaa sharci doorasho ugu horeyso. Waxaa kaloo ku jirtay inaan helno dhaqaale iyo in nabadgelyadii la suggo. Midda ugu weyn waxay ahayd in heshiis siyaasadeed laga wada gaaro doorashadaas aan sheegeynay in loo wada qaato. Sidii ayaana ku soconay weligeyd.”
“Doorashada waqtigeeda inaan ku qabano ma aanan ku guuldareysanin. Doorashada waan sheegeynay waxaan u baahanahay inaan qabano. Madasha waxaa laga rabay inay Xisbiyo joogto ah iska soo dhigaan, laba ka mid ah maanta way ka shaqeeyeen, wayna soo buuxiyeen, inta kalana waxaan ugu baaqeynaa inay saas yeellaan, ayna ka shaqeeyan sidii ay Xisbiyo rasmi ah u noqon lahaayen. Inay nagala shaqeeyan ayay ahayd baadi-goobka sharciga doorashada.”
“Anaga waxaan is casileynaa haddii dembiile noqono, haddaan qaa’inal wadaniyiin noqono, haddii shaqadii naloo diray aan qaban weyno. Shaqadii naloo diray ma aanan qaban weynin.”
“Waxaan is casileynaa marka intii sharcigii doorashada faraha naloo geliyo asagoo dhameystiran, markii heshiis siyaasadeed aan heyno ee nala diray, ee nala yiri qabta doorashada oo aan qaban weyno. Waxaan nahay hay’ad dastuuri oo aad u dhisan, shaqaale cajiib ah leh oo hufan, waayo arag ah, shaqadoodana qaban kara inaanu nahay.”
Xerada Ciidanka Jabuuti Ee Gobolka Hiiraan Oo Xalay Weerar Lagu Qaaday
Faroole:- Waan Ka Xumahay In Muqdsiho La Siiyo Kuraas